Otu n'ime ndị kasị chọọ mgbe ojiji nke Mgbe mmetụta bụ ikike izubandu ederede, na nke a bụ ọ na anya, ọ bụ ihe dị irè, mfe mejuputa mgbakwunye na anya nnọọ mma na ihe ọ bụla mmepụta.
E nwere, n'eziokwu, a ole na ole ụzọ dị iche iche izubandu ederede na Mgbe mmetụta. Ị nwere ike iji presets, na-eji igwefoto n'ígwé ma ọ bụ ọkwá akara.
Mbụ ụzọ na-animated ederede n'ime gị oru ngo bụkwa ihe kasị n'ụzọ kwụ ọtọ ụzọ, na nke ahụ bụ site na iji presets n'ime Mgbe mmetụta, ya mere, ka nwere a lee anya na usoro.
1. Isetịpụ Up
Gbaa mbọ hụ na ebe a na ị nwere gị oru ngo niile kwajuru na usoro iheomume na njikere ga-arụ ọrụ na.
Iji ọma na-egosipụta ndị a usoro m kere ọhụrụ oyi akwa otu ugboro m footage e dị, na-eji Layer> New> Solid, m kere a Mkpa ọkụ ndabere maka iche na nwa ederede dị iche na-enyere ndị screenshots. M mgbe ahụ kere abụọ n'ihu akpọkwa, otu na-agụnye okwu ndị bụ 'ngosi Text' na onye nke nwere 'Animation'. Nke a ga-etolite mmalite mgbe n'ihi na atọ nile n'ụdị nke na-aga aga, otú anyị amalite dị ka n'okpuru, anyị ga-a njem site n'itinye a preset.
2. Iji a preset
E nwere ụzọ abụọ ka ịnweta wuru na-prests maka Mgbe mmetụta, ị nwere ike na-aga site faịlụ Ọdịdị Animation> atọrọ atọ, ma ọ bụ simly eji mmetụta na atọrọ atọ taabụ na nri. E nwere ọtụtụ nke presets na mmetụta, ya mere na a screenshot m abawanye ka taabụ na-egosi ebe ederede mmetụta na-achọta.
Dị ka anyị pụrụ ịhụ, e nwere ọtụtụ nke dịgasị iche iche ebe a maka ọtụtụ ọnọdụ na nke a, preset bụ mfe usoro. Onye ọ bụla subsection nke presets agụnye a ọnụ ọgụgụ nke ọzọ na-agbalị, na ebe anyị niile na-eme ejedebe na anyị ọkacha mmasị, n'ihi ọhụrụ ọrụ nke Mgbe mmetụta m na-nwere ike ikwu na-agbalị ole na ole si na experiementing ịhụ ndị nke asatọ gị oru ngo kasị mma. N'ihi na ndị ọrụ nwekwara Adobe Bridge arụnyere, ị pụrụ ịhụ ọnụọgụgụ nke mmetụta site na-ahọpụta presets si Animation taabụ nke na-ebupụta Bridge na-egosipụta ha. Bụrụ na ọ bụghị, nanị ịdọrọ ha jidesie gị ihe na-egwu ya.
3. Itinye a preset
Nke a bụ ihe dị mfe okwu nke dọlite ​​na-aga aga preset ị chọrọ jidesie ihe ị chọrọ izubandu. Ee, n'ezie, ọ bụ na mfe. N'ihi na onye ọ bụla preset e nwere a na-emekarị ụfọdụ nhọrọ ka ịhazie na-aga aga ona, ma na ọ bụ n'ezie, ndị na họọrọ na-aga aga na-ewere ọnọdụ mgbe họrọ oge na usoro iheomume.
Na ihe atụ a, anyị ịdọrọ na-aga aga 'Full adiana' jidesie ihe 'ngosi Text', dị ka anyị pụrụ ịhụ họọrọ ihe a pụta ìhè acha ọbara ọbara, uru ma ọ bụrụ na ị nwere ọnụ ọgụgụ nke akpọkwa na nso iji hụ na ị kụrụ nri onye.
4. Iji Position Nyenụ
Nke abụọ usoro nke ndụ ederede bụ iji positional njikwa na usoro iheomume. Ugbu a, anyị na-aga ịkpali 'Animation' ihe, otú ahụ ka anyị mụbaa usoro iheomume nhọrọ maka na ederede ihe dị ka anyị pụrụ ịhụ n'ebe a.
Anyị na-achọ kpọmkwem maka ọnọdụ àgwà na-agbanwe na ngalaba dị ka anyị pụrụ ịhụ. Na ịpị elekere nkwụsị emepụta a keyframe n'ihi na ihe na-na ọnọdụ na usoro iheomume.
5.-eke ndị na-aga aga
N'ihi ya, na mbụ keyframe kere, ị nwere ike ugbu ịkpali usoro iheomume cursor-atụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị, na mgbe ahụ ịgbanwe ihe ọnọdụ ona gị mkpa, a ọhụrụ keyframe ga-kere na-akpaghị aka mgbe ọ bụla ị na-eme nke a. Iji usoro a ị na-akpali usoro iheomume na sekọnd ole na ole, setịpụrụ ọhụrụ ọnọdụ maka gị ederede, na ike ọzọ keyframe n'ebe ahụ mgbe ikwugharị. Mgbe mmetụta ga jupụta na gaps na izubandu gị ederede n'etiti Họpụtara ihe n'oge họọrọ usoro iheomume, na ojiji nke ọtụtụ keyframes i nwere ike na-etolite ọbụna a mgbagwoju ụzọ maka ederede na-eso bụrụ na ị chọrọ.
Lee, m kere 4 isi okpokolo agba na ka 'Animation' ihe aga gburugburu 'ngosi Text' Object na n'ikpeazụ abịa zuru ike n'okpuru ya. Ebe a na ụdị mmetụta na-adịghị anya nnọọ irè na ihuenyo, nke ahụ bụ ala nke iji nke Mgbe mmetụta ọ bụ n'ezie dị nnọọ a nkeji ole na ole ọrụ iji nweta.
6. Igwefoto n'ígwé
Ihe mbụ na--gaa na akaụntụ na a Usoro bụ na igwefoto n'ígwé nwere ike na-ịgbanwe akpọkwa ndị na-na 3D mode. N'ihi na usoro a, nzọụkwụ mbụ ahụ bụ ịmafe gị ihe na-3D site toggling 3D nhọrọ ke mejupụtara panel.
N'ebe a, anyị pụrụ ịhụ na m toggled niile n'ígwé ka 3D (nke cube akara ngosi), nnọọ pịa na igbe ime nke a, ma nakwa kere igwefoto oyi akwa mkpa maka a Usoro, nke a bụ nanị n'ígwé> New> Igwefoto, nke ahụ ọnọde nhọrọ maka igwefoto onwe ya.
7. Ịghọta echiche
Isi ihe na-na-na grips na igwefoto oyi akwa bụ ịghọta otú ije-emetụta ihe, na aka na nke a ọ kasị mma ịgbanwe gị mejupụtara panel ele ebe a, na-eji dobe ala menu n'okpuru.
Lee, emewo m Switched abụọ echiche (i nwere ike iji 4 nakwa bụrụ na ị chọrọ), echiche ziri ezi na-egosi na oru ngo n'ihu dị ka ndị nkịtị 2D echiche ga-abụ, echiche ziri ezi na-achọ kpọmkwem ala na oru ngo na ga-akụ atụ na backward ọkwá ya dị ka anyị na-ihe. Ndị a echiche na-uru maka idebe uzo nke ebe igwefoto bụ na ihe niile na-eme.
8. Ịmepụta ije
Nke a na-arụ ọrụ na ya isi, na otu ụzọ ahụ dị ka positional njikwa mere dị ka anyị tụlere na mbụ, Otú ọ dị, e nwere ihe ole na ole ndị ọzọ echiche ebe a.
Ka anyị pụrụ ịhụ, ugbu a, anyị bụ ndị na 3D mode, onye ọ bụla ihe nwere ihe atọ axis nke ọnọdụ ịgbanwe ugbu a, na tinye ọbụna ihe ọzọ ohere, igwefoto onwe ya nwere ike kpaliri gburugburu akpọkwa kwa, site na iji otu keyframe usoro dị ka tupu, na dị ka iso, Mgbe mmetụta ga jupụta na ije n'etiti keyframes maka gị.
Ebe i nwere ike ịhụ na mmetụta nke n'ịgbanwe igwefoto ọnọdụ dị nnọọ na iji x-axis, site na ijikọta igwefoto mmegharị na rotations na mmegharị nke akpọkwa ị nwere ike ịmepụta nnọọ mgbagwoju ije mmetụta n'ezie.
Ka anyị pụrụ ịhụ, e nwere ụzọ dị iche iche nke na-eke animated ederede maka gị na oru ngo, nke ị na-ahọrọ ga-adabere na ojiji, ma na presets ọbụna beginners nwere ike ịmepụta ụtọ mmetụta maka ha oru ngo na nnọọ nta nsogbu oge. Positional Control-agbakwụnye na ihe bụ omume na a obere mgbakwunye na nke complexity na usoro, ma ọbụna na bụ dịtụ mfe usoro nghọta. Ebe n'elu igwefoto n'ígwé usoro-egosi otu dị ka positional akara usoro na okwu nke ihe i nwere na-eme, na eziokwu na ọ bụ a ọzọ tricky echiche na-na-grips. The n'ezie edinam nke na-eke keyframes na ọnọdụ mgbanwe tinyere usoro iheomume, na mgbe ahụ ikwe Mgbe mmetụta jupụta na gaps, sis n'ezie otu, na ihe dị mfe echiche ịmụta ihe, Otú ọ dị, na mgbakwunye na nke ọ bụghị nanị nke atọ ije axis, ma igwefoto ije dị ka nke ọma na-enye gị dịkarịa ala 6 axis ịtụle, bụ ebe ihe isi ike na-abịa. Ọ na-ewe na-eme na-enwe ike iji anya nke uche ebe ihe na-aga, ihe ị na-agbali iji nweta na nke a, ma n'ihi ndị kacha na ohere, e nweghị ihe ịrụ ụka ọ bụ onye ịhụ maka emecha.
Mgbe mmetụta VS Adobe Premiere, 9 Iche ịgwa unu nke Otu bụ Mma?
Olee otú Mee a Video enweghị a Igwefoto
Top 5 Free Online WMV ka MOV Ntụgharị
Olee otú iji weghachite Videos si JVC Camcorders
Video Watermark - Olee ka Watermark a Video na Video ma ọ bụ Photo
Olee ka a ghara ịma Pictures na Video
> Resource> Video> Olee otú Mepụta Text Animation na Mgbe mmetụta